Fandringanana Warlock - Guides PVE - Patch 8.0 | Brujos, Game Guide | WoW Guides | WoW mpitari-dalana
Fandringanana Warlock - Guides PVE - Patch 8.0
Adrian Da Cuna | | mpamosavy, Game Guide
Aloha! Androany aho mitondra anao ity torolàlana ity ho an'ny Destruction Warlock izay hasehoko anao izay talenta sy fitaovana tsara indrindra ho an'ny tsiriko.
1 Fandringanana Warlock
2 Fanovana amin'ny patch 8.0
4 niveau 15
5 niveau 30
6 niveau 45
7 niveau 60
8 niveau 75
9 niveau 90
10 niveau 100
11 Antontan'isa faharoa
14 Flasks sy potion
15 Torohevitra mahasoa
16 Ekipa BIS
17 Addons ilaina
Amin'ny maha tompon'andraikitra ny zavakanto demonia azy, Warlocks dia nanaparitaka fahalotoana ary niantso demonia mba hanampy amin'ny ady.
Fanovana amin'ny patch 8.0
nofafana Antsoy ny mpiambina apokaliptika.
Ny cooldown an'ny nandringana fa ny tanjona tratra faharoa kosa dia 60% fotsiny amin'ny fahavoazana.
Ny fahombiazan'ny pacta maizina, Hoditry ny demonia y lakandrano.
miantso infernal hanompo anao izao mandritra ny 30 seg, manimba (50% ny herin'ny tsipelina) fahasimbana. fahavoazan'ny fahavalo manodidina rehetra isaky ny 2 seg ary miteraka Sombim-panahy Shard 1 isaky ny 0.5 seg.
Fipoahana setroka dia fahaizana base ankehitriny.
mirehitra izao dia tsy misy afa-tsy fiampangana 1 fotsiny.
Ary holazaiko aminao izay talenta hitako fa mety hananana amin'ny fananganana anay sy ny fanazavàna ireo talenta rehetra misy.
Haavo 15: Fandoroana tampoka.
Haavo 30: Fandoroana anaty.
Haavo 45: Momentum mandoro.
Haavo 60: Cataclysm.
Haavo 75: faribolana demonia.
Haavo 90: Mirehitra mirehitra.
Haavo 100: fantsom-panahy.
Fandoroana tampoka- Ny fifandirana dia miteraka fahasimbana 25% bebe kokoa ary manome fiampangana fanampiny amin'ny Smoke Blast.
fanafoanana: Chaos Bolt dia mampitombo ny fahasimbana atrehinao amin'ny tanjona 10% mandritra ny 7 seg.
Afo fanahy: Mandoro ny fanahin'ny fahavalo, mifampiraharaha (100% ny herin'ny tsipelina). Fahasimban'ny afo. Ny cooldown dia ahena 2 segondra isaky ny Soul Shard laniny. Mamelatra sombin-tsakafo 4 fanahy.
Amin'ity sampana ity dia manana fahafaha-manao betsaka ireo talenta telo saingy misongadina etsy ambony izy ireo Fandoroana tampoka y fanafoanana.
fanafoanana Misongadina ambonin'ny zava-drehetra izy io, saingy misy lafy ratsy eo aminy: raha tsy misy ny hafainganam-pandeha tsara dia tsy afaka manararaotra ny talenta isika. Mandra-pahatongantsika izany fotony izany dia tsara ny manararaotra Fandoroana tampoka fa ny fampiasana azy dia ankapobeny kokoa ary manome ny lalao ihany koa.
Ho an'ny zavatra atoroiko voalohany Fandoroana tampoka mandra-pahatonga ny hafainganam-pandehananao tombony hahafahanao mivoaka bebe kokoa fanafoanana.
Entry entropy: Manana ny fahafaham-po hanome anao maimaimpoana 15% mandritra ny 8 sec ny famosavianao.
fandoroana anaty: Chaos Bolt dia mandany hatramin'ny 5 segondra ny fanimbana ataon'ny Immolate amin'ny fotoana kendrena amin'ny zava-kendrena, hiatrehana izany fahavoazana eo noho eo izany.
aloka may: Mikendry lasibatra (60% amin'ny herin'ny tsipelina). Fahasimban'ny Shadowflame. Raha maty ao anatin'ny 5 seg ny tanjona ary mitondra traikefa na voninahitra dia averina indray ny zanak'olo-mpiray tanindrazana amin'i Shadow Burn. Ny sombintsombin'ny sombintsombin'ny fanahy dia miteraka 3.
fandoroana anaty no talenta kintana, manatsara ny fahasimbanao fanesorana korontana misaotra mamono. Nifantoka indrindra tamin'ny fahasimbana tsy nahitam-bokatra.
Amin'ny kombina multitarget dia manonitra antsika izy io Entry entropy. Izy io koa dia mifangaro amin'ny talenta fanafoanana mba hahazoana tombony betsaka amin'izany.
hoditra demonia: Ny Soul Parasite anao dia mitroka indray mandeha indray amin'ny taha 0.5% amin'ny fahasalamana fatratra isaky ny 1 seg ary afaka mandray hatramin'ny 15% amin'ny fahasalamana faran'izay betsaka.
Fihetsiketsehana mirehitra: Ampitomboina 50% ny hafainganam-pandehan'ny fihetsikanao, nefa koa mitondrany 4% amin'ny fahasalamanao fara-fahakeliny isaky ny 1 sec Ny fihenan'ny hetsika dia tsy afaka mampihena ny hafainganam-pandehan'ny hetsikao ambanin'ny 100% amin'ny hafainganam-pandehan'ny hetsika mahazatra. Maharitra mandra-panafoanana.
pacta maizina: Soraty ny 20% amin'ny fahasalamanao ankehitriny hanomezana anao ampinga misy 250% amin'ny fahasalamana sorona ho an'ny 20 seg. Izy io dia azo ampiasaina raha mbola eo ambanin'ny vokatry ny fahaverezan'ny fifehezana.
Fihetsiketsehana mirehitra izy no talenta tsara indrindra an'ny Warlock, mamaha olana somary manahirana: ny fivezivezena an-dakilasy. Ampiasaina be amin'ny toe-javatra ankapobeny.
Amin'ny fivoriana izay tsy mandeha na tsy misy ny fivezivezena ary tsy ilaina ny mihetsika be na haingana dia tsara indrindra hoditra demonia. Fitsaboana mandalo tsindraindray izay miasa be ary manampy ny mpitsabo hamonjy mana mana.
pacta maizina Izy dia talenta voatondro amin'ny toe-javatra manokana izay manjaka ny fahavelomana. Tsy atoro afa-tsy amin'ny fihaonana izay misy toe-javatra manimba.
inferno: Ny fahavoazan'ny oran'ny afo dia manana vahana 20% hiteraka Soul Shard Chunk.
Afo sy solifaraMamono ny fahavalo rehetra eo akaikin'ny kendrenao ihany koa ny incinerate ankehitriny, miatrika fahasimbana 40% ary mamorona 1 Soul Shard Chunk isaky ny fahavalo fanampiny.
taorian'ilay loza: Miantso amam-baravarana amin'ny toerana kendrena izay mifampiraharaha (180% ny herin'ny tsipelina) p. Ny fahasimban'ny Shadowflame amin'ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra ary manolotra azy ireo.
Amin'ny toe-javatra ankapobeny sy indrindra tsy mitongilana taorian'ilay loza. Ho an'ny multitarget ny tsara indrindra dia Afo sy solifara, fanatsarana ny fahafahan'ny fihodinananay lehibe ary ny famoronana shards bebe kokoa.
Fahatezerana maizina: Mampihena ny cooldown an'ny Shadow Fury amin'ny 15 seg.
mahafaty: Mampihorohoro ny tanjon'ny fahavalo mandositra ary tsy mahavita azy ireo mandritra ny 3 seg. Manasitrana anao amin'ny fahasalamana 20%.
Faribolana demonia: Miantso faribolana demonia mandritra ny 15 min. Cast Demonic Circle - Teleport handefa teleport amin'ny toerany ary esory ny fihenan'ny hetsika miadana rehetra.
Toy ny tamin'ny sampana 45, ny talentantsika dia Faribolana demonia hanatsarana ny fivezivezena, ny tena fahalemen'ny Warlock.
Ireo talenta hafa Fahatezerana maizina y mahafaty Manana fomba PvP bebe kokoa izy ireo noho ny PvE.
Grimoire of Supremacy: Na dia miasa mavitrika amin'ny Inferno aza ianao dia mampitombo ny 8% ny fahasimban'ny Chaos Bolt anao.
mirehitra mirehitra: Ny fifandirana dia mahatonga ny kendrena hirehitra ho an'ny (48% ny herin'ny tsipelina). fanampiny simba Afo mihoatra ny 6 seg.
Grimoire an'ny sorona: Atolory hery ny biby fiompy demonia mba hahazoanao ny fahaizan'ny Demony Mastery. Ho fanampin'izany, mahatonga ny ozinao indraindray koa (35% ny herin'ny ody) p. fanampiny simba Shadow. Maharitra adiny 1 na mandra-piantsoanao biby fiompy demonia.
Nisy zavatra nitovy tamin'ity sampana ity nitranga tao amin'ny sampana 15. Ny talenta tsara indrindra dia Grimoire of Supremacy fa mila toby haingam-pandeha avo isika mba hitrandrahana betsaka indrindra amin'ny Inferno antsika, izay maharitra 30 segondra.
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra sy amin'ny ankapobeny mirehitra mirehitra.
Fa araka ny nolazaiko tany amin'ny sampana faha-15 aloha dia atoroako mirehitra mirehitra mandra-pahatonga ny hafainganam-pandehananao tombony hahafahanao mivoaka bebe kokoa Grimoire of Supremacy.
Lakan-drano: Ny Soul Shard laninao dia manana vintana 15% haverina amin'ny laoniny.
Afon'ny Channel Demon: Afo 15 tadiny fel afo mihoatra ny 3 seg amin'ny fahavalo sendra voan'ny Immolate anao ao anatin'ny 40 metatra. Ny fifanolanana tsirairay (16% amin'ny herin'ny Spell). Fanimbana ny afo amin'ny kendrena ary (7% ny herin'ny tsipelina). Fanimbana afo ny fahavalo akaiky.
tsy fandriam-pahalemana: Mampiditra hery tsy milamina ao amin'ny fanahinao, mampitombo ny tombam-bidin'ny fitokonanao 30% mandritra ny 20 seg.
Lakan-drano y tsy fandriam-pahalemana safidy tena tsara izy ireo. Lakan-drano mety ho ambony etsy ambony io tsy fandriam-pahalemana satria mila haingam-pandeha maika hanararaotra azy io satria miseho amin'ny sampana 15 sy 90 fa ny safidy roa dia azo atao tanteraka.
Haingam-pandeha = Fitokonana manakiana> Fanapahan-toetra> Fifehezana
vozon'akanjoko: Enchant neck - Mariky ny satyrita miafina
Peratra: Peratra enchant - Famatorana ny fahamaimaizana
Cap: Enchant Cloak - Famatorana ny faharanitan-tsaina
Saber maso ny fahiratan-tsaina: Fahaiza-manao +200.
Jiro haingana: +200 Haingana.
Flasks sy potion
Tavoahangin'ny paositra mibitsibitsika
Potion ny hery maharitra
Araho maso foana mamono satria tsy maintsy mavitrika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fahavalo betsaka araka izay tratra izy.
Isaky ny afaka mihetsika ianao miantso infernal. Hatsarao ny fahavoazanao Grimoire of Supremacy ary ampitomboy tsara ny tahiry Soul Shards anao.
Aza manipy mihitsy fanesorana korontana amin'ny Fandoroana anaty	si tu mamono dia ambanin'ny 5 s.
Ny fotoana mety indrindra hampiasana tsy fandriam-pahalemana dia manana sombintsombiny fanahinao amin'ny fetra farany handefasana ny rehetra fanesorana korontana azonao atao.
Raha kely sisa ny anao tsy fandriam-pahalemana fampiasana mirehitra afaka mampihetsika hafa fanesorana korontana ary ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny tena fahalemen'ny Warlock dia ny fivezivezena tsy misy. Ampitomboy ny fahafahanao ho tafavoaka velona sy mihetsika miaraka Portiogaly demonia y Faribolana demonia. Mampiasa ihany koa Fihetsiketsehana mirehitra fa amin'ny fitandremana tsara satria mandany fiainana be dia be sy amin'ny toe-javatra misy fahasimbana amin'ny faritra iray dia mety hanimba ny fiainanao izany. Ampiasao am-pahendrena izany ary esory izany isaky ny tsy ilaina ny fitomboan'ny fihetsika mahery vaika.
Groove Anaran'ny ampahany Bis Boss izay mamela
Casco Sarontava maty ho an'ny mpangataka maloto Aggramar
Pendant Rojony Annihilator Argus the Unmaker
Fehin-tsoroka Lesona avy amin'ny fotoana-habakabaka malaza
sosona Fitafiana maloto an'ny mpangataka Amiraly Svirax
anoloana Mpampijinja Master malaza
Bracers Famatorana voaron'ny rà Varimatra
fonon-tanana Aranasi Shadowweaver Gloves Mpiandry varavarana Hasabel
fehin-kibo Tady fampakarana hysterika Varimatra
pataloha Leggings an'ny mpangataka maloto Imonar the Soul Hunter
kiraro Akanjo landy Lady Dacidion Mpiandry varavarana Hasabel
Tady 1 Peratra mpampijaly zotom-po Noura, Renin'ny Flames
Tady 2 Tombo-kasen 'ny Portalmaster Mpiandry varavarana Hasabel
Trinket 1 Fahitana an'i Aman'thul Argus the Unmaker
Trinket 2 Acrid catalyst injecteur Kin'garoth
Fel Relics Sarin'ny kolikoly Aggramar
Relic afo Fanovana Ignition Hellfire Mpamadika an'izao tontolo izao Garothi
ElvUI: Addon izay manova ny sehatr'asao manontolo arak'izay tokony ho hitanao rehetra.
Bartender4/ambin 'ny daomy: Addon hanamboarana bara fihetsika, ampio hitsin-dàlana fitendry, sns.
MikScrollingBattleText: Fanampian'ny lahatsoratra miady amin'ny ady, fanasitranana, fahasimban'ny fahaizana sns.
DeadlyBossMods: Addon izay mampitandrina antsika amin'ny fahaizan'ny mpitarika andian-jiolahy.
Tantarao/Metera fanimbana Skada: Addon handrefesana ny dps, ny agro niteraka, ny fahafatesana, ny fanasitranana, ny fahasimbana azo, sns.
EpicMusicPlayer: Addon hihainoana mozika natokana ho azy. Tonga mora foana ny fihainoana an'i Jodasy Priest na Type O Negative eo am-pofoana an'i Argus.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Fandringanana Warlock - Guides PVE - Patch 8.0
Rogue Subtlety - Torolàlana PVE - Patch 8.0
Fanamboarana mivantana: 25 Jolay